Vaovao - Tsy hifarana tsy ho ela ny valan'aretina！
Tsy hifarana afaka 1-2 taona ”
"Ny satro-boninahitra vaovao dia mety hivadika tsikelikely amin'ny areti-mifindra miaina amin'ny vanim-potoana akaiky ny gripa, saingy ny manimba azy dia lehibe kokoa noho ny gripa." Tamin'ny maraimben'ny 8 Desambra, Zhang Wenhong, talen'ny departemantan'ny aretina mitapoka, hopitaly Huashan, oniversite Fudan, dia nilaza tao amin'ny Weibo. Tamin'ny faha-7, nanambara i Shanghai ny valin'ny fitsirihana ireo tranga 6 voamarina teny an-toerana izay voalaza teo anelanelan'ny 20 sy 23 novambra. Ireo faritra mora iharan-doza dia nosokafana avokoa taorian'ny roa herinandro nikatona. Ilay tontolo mbola mihidy dia nanjary tsy misy dikany amin'ireo karazan-baovao rehetra, ary toa tony ihany koa ny vinavina hisorohana ny valanaretina, saingy fisehoan-javatra maromaro no nanambara ny fisehoan-javatra mety hitranga amin'ny fifanakalozana manerantany amin'ny taona ho avy. Fomba hanatanterahana ny fifanakalozana iraisampirenena ao anatin'ny valan'aretina
Mikasika ny fitoviana misy eo amin'ny Shanghai International Import Expo sy ny paikadin'ny fisorohana ny valan'aretina Lalao Olaimpika Japoney dia nilaza i Zhang Wenhong fa voalohany, tamin'ny 10 Novambra, ny Shanghai International Import Expo dia nikatona tamim-pahombiazana teo ambany fitantanana loop loop. Ny olona miditra dia nampihatra ny fitantanana loop loop ary nandao ny firenena taorian'ny fivoriana. Ny mpitsidika rehetra dia hotsapaina amin'ny asidra nokleika ary tsy misy fameperana hafa apetraka. Maherin'ny 1,3 tapitrisa ny olona nandray anjara tamin'ny CIIE. Ny fivoarany mahomby dia azo raisina ho toy ny fizahana hetsika lehibe iraisam-pirenena mifandraika amin'ny sehatra iraisana, na dia amin'ny ambaratonga kely aza.
Zhang Wenhong dia nanolotra fa ny herinandro lasa teo dia nifanakalo tamina manam-pahaizana manokana momba ny fisorohana ny valanaretina nasionaly ao Japana izy. Fampahalalana roa no tsara hojerena. Ny iray dia i Japon hanao ny Lalao Olaimpika araka ny voalahatra, ary ny iray kosa dia i Japon dia efa nanafatra ny vaksininy herintaona ho an'ny taona manaraka. Na izany aza, ny fanadihadiana natao dia milaza fa ny 15% amin'ny olona ihany no maniry mafy hanao vaksiny, manodidina ny 60% no misalasala, ary ny 25% ambiny kosa dia nilaza mazava fa tsy hatao vaksiny. Ny fomba hanombohan'ny lalao Olaimpika ao anatin'izany toe-javatra izany dia tsy afaka ny tsy ho mampieritreritra.
Ireo fepetra fisorohana ny valanaretina nambaran'ny komity olympika japoney dia misy fitoviana betsaka amin'ny an'ny Shanghai International Import Expo. Azo jerena fa ireo fepetra ireo dia mety ho modely fanovozan-kevitra ho an'izao tontolo izao hanombohana fifanakalozana amin'ny ho avy. Ho an'ireo atleta avy amin'ny firenena sy ny faritra manana valan'aretina mahery vaika kokoa, dia tsy maintsy sedraina izy ireo noho ilay virus satro-boninahitra vao tonga any amin'ny seranam-piaramanidina Japoney. Alohan'ny hisian'ny valim-panadinana, ny atleta dia tsy afaka mijanona afa-tsy amin'ny faritra voatondro ary mampihatra fitantanana mihidy.
Mifanohitra amin'ny paikady fanoherana ny valanaretina olympika japoney, ny lalao olaimpika japoney dia mikasa ny hanao andrana asidra nokleika ho an'ny fidirana any ampitan-dranomasina hijerena ny fifaninanana. Aorian'ny fidirana dia tsy hisy famerana ny hetsika ary tsy hisy karokantinina fidirana, saingy mila apetraka ny làlan-kizorana taorian'ny fidirana. Raha vao misy tranga iray dia ilaina ny fisorohana sy ny fanaraha-maso marina. Paikady hanarahana ny fifandraisana akaiky rehetra ary handraisana fepetra fisorohana ny valanaretina. Izany dia mitovy amin'ny paikady fisorohana sy fifehezana ny Shanghai International Import Expo sy ity valanaretina eto an-toerana ity.
Ny fisorohana sy ny fanaraha-maso marina dia ho lasa safidy iraisan'ny rehetra
Zhang Wenhong dia nilaza fa ny fisorohana sy ny fanaraha-maso marina dia ho lasa safidy iraisana manerantany. Vao tsy ela akory izay, faritra maromaro atahorana olona any Shanghai no voasakana. Ny lakilen'ny fisorohana ny valanaretina any Shanghai amin'ity indray mitoraka ity dia miankina indrindra amin'ny fanaraha-maso marina sy ny fizahana asa feno amin'ny faritra sasany atahorana. Izy io koa dia manome safidy ho an'ireo tanàna lehibe indrindra hampihenana ny mety hisy fiantraikany goavana amin'ny hetsika ara-toekarena amin'ny alàlan'ny fisorohana sy fifehezana.
Miaraka amin'ny habetsahan'ny vaksinina dia hisokatra miandalana izao tontolo izao. Na izany aza, satria ny vaksiny dia sarotra atao manerana izao rehetra izao (na inona na inona valin'ny fanadihadiana natao momba ny fikasan'ny vaksinin'ny tsirairay na ny zava-misy fa sarotra ny fanatontosana ny famokarana manerantany amin'ny dingana iray), dia tsy hifarana ao anatin'ny 1-2 taona ny valanaretina manerantany. Na izany aza, amin'ny sehatry ny fisokafan'izao tontolo izao sy ny fanamorana ny fisorohana ny valanaretina, ny fisorohana ny valanaretina marina dia mety ho lasa safidy iraisan'ny besinimaro amin'ny ho avy.
Nilaza izy fa ao anatin'ny tontolon'ny fanokafana tsikelikely an'izao tontolo izao sy ny famoahana tsimoramora ny vaksinina dia tsy maintsy mamaly tsara ny rafitra fitsaboana China. Aorian'ny fanaovana vaksiny ny olona be risika dia hihena tsikelikely ny satroboninahitra vaovao amin'ny ho avy, ary mety hivadika tsikelikely ho aretina azo avy amin'ny taovam-pisefoana isaky ny vanim-potoana ny gripa, saingy ny fahavoazany dia lehibe kokoa noho ny gripa. Amin'io lafiny io, ny hopitaly lehibe dia tsy maintsy manana sampana fisorohana sy valiny voajanahary, izany hoe ny sampan-draharahan'ny aretina. Ho setrin'izany dia nanao fivoriana tao amin'ny Hopitaly Voalohany People's Shanghai ny System Health Health Shanghai tamin'ny faran'ny herinandro. Ny talen'ny hopitaly sasany avy amin'ny Yangtze River Delta sy ny Pearl River Delta dia nandray anjara tamin'ny adihevitra velona ary niresaka momba ny paikady fisorohana sy fifehezana COVID-19 ho avy. . Niomana hiatrika ilay viriosy i Shina ary ho avy misokatra.